हजुरको खबरअपडेट : ११ जनाको मृत्यु, वर्षाले कुन जिल्लामा कति क्षति पुर्‍यायो ? हेर्नुस्
शुक्रबार​, आषाढ २७ २०७६ प्रकाशित
बागमतीमा ठुलो बाढी,स्थानिय त्रसित
मकवानपुरको पूवी क्षेत्रमा पर्ने बागमती गाउँपालिका र ललितपुर बागमती गाउँपालिकाको सिमनामा रहेको बागमती खोलामा पनि ठुलो बाढी आएको छ । निरन्तर वर्षाको कारण स्थानिय त्रसित रहेका छन् । हाल सम्म बागमतीमा मानविय क्षेती भने भएको छैन ।
कैलाश ५ मा पहिरोमा परि पाख्रीन बेपत्ता
लगातार परेको बर्षाका कारण मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकामा माथिबाट झरेको पहिरोमा परि एकजना वेपत्ता भएका छन् । कैलाश गाउँपालिका ५ कालिखोलामा आएको पहिरोमा परी स्थानीय तारामाया पाख्रीन बेपत्ता भएको वडा नं ५ का वडाध्यक्ष छेकु लामाले जानकारी दिए । उनको खोजी कार्य जारी रहेको जनाईएको छ ।
गर्भवतीलाई डोजरले खोला तार्यो
मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका भैसे बागझोरा खोलामा बाढी आएका कारण गर्भवतीलाई हेटौंडा अस्पताल ल्याउन नसकेपछी डोजरको माध्यमले खोला तारेर ल्याइएको छ । सुत्केरी व्थाथा लागेकी गर्भवती महिला छट्पटीन थालेपछी डोजरका माध्यमले खोला तारिएको हो ।
हेटौडाका २ वडा पनि ढुवानमा
गए राति देखि परेको अविरल वर्षाका कारण हेटौंडा नगरका विभिन्न स्थान जलमग्न भएका छन् । अविरल वर्षाका कारण कर्रा, राप्ती, कुखरेनी र नगर भित्र पर्ने खहरेहरुमा पानिको बहाव उच्च रहेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय खोलाको पानी बस्तीमा पसेपछी दर्जनौ परिवार बिस्थापित भएका छन्। पानी पसे पछि हेटौंडा ४ र ५ को पिप्ले, शान्तिनगर, गर्दोइ, माछापालन सानो पोखरा लगायतको स्थान जलमग्न भएको हो । डुबानमा परेका स्थानका व्यक्तिहरूलाइ सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागि हामी खटिरहेको छौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले भने ।
पहिरोले पुरियो कार
मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाकोे कलंकीमा पहिरोले कारलाई पुरेको छ । आज विहान इन्द्रसरोबर गाउँपालिका वडा नंबर १ को सडकमा गुडिरहेको कारलाई पहिरोले पुरेको हो । हेटौंडाबाट काठमाण्डौ तर्फ जाँदै गरेको बा २ च ९९२० नम्वरको निजी कार पहिरोले पुरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक मुकेश कुमार सिंहले बताए । कार पुरिएको भएपनि मानविय क्षति भने नभएको उनको भनाई छ ।
पुर्वी मकवानपुरमा यातायात अबरुद्ध, यात्रुको विचल्लीे
बर्षतका कारण पुर्वी मकवानपुर र हेटौँडाको यातायात सम्पर्क टुटेको छ । वर्षातको कारण धरना चतरा सडकखण्डको फुर्केचौर श्रीपुर सडकखण्डमा पहिरो जाँदा यातायात अबरुद्ध गरेको हो । पहिरोको कारण निर्माणधिन सडकको केहि क्षेत्रमा भएको पिच समेत भत्कीएको स्थानियले बताएका छन् । पहिरोले विद्युतिय पोल ढाल्दा दुई दिनबाट पुर्र्वी क्षेत्रमा विद्युत सेवा समेत अबरुद्ध भएको छ । यातायात बन्द हुँदा छतिवन, फापरबारी, राईगाउँ लगाएतका यात्रुरुहरु अलपत्रमा परेका छन् । यस्तै मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित बागझोरामा बाढी आएको छ । उक्त बाढीकाका कारण हेटौंडाबाट भैसे, नामटार, दामन पालुङ र भिमफेदी, सिस्नेरी, फोखेल हुँदै काठमाडौं जाने बाटो अवरुद्ध भएको छ । बागझोरा खुलाउँने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घलानको घर पुर्यो पहिरोले
अविरल बषाको कारण भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ दमारस्थित सोमबहादुर घलानको घर पहिरोले पुरेको छ । घरसंगै उनका परिवार समेत पहिरोमा परेको स्थानीय सुरेन्द्रराज थिकेले जानकारी दिए । पहिरोमा परेर मानविय क्षति भएको हुनसक्ने आशँका गरिएको छ । घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ । अविरल बर्षाकै कारण भीमफेदीमा सडक अवरुद्ध हुनुको साथै विद्युत प्रवाहमा समेत समस्या भएको छ
थाहामा खोलाले बगाउँदा वालिकाको मृत्यु, ,विद्युत अबरुद्ध
मकवानपुरको थाहानगरपालिका महाभिर खोलाले बगाउदा एक विद्यार्थीको ज्यान गएको छ । जनकल्याण माविमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत १२ बर्षकी संचना बलामीको मृत्यू भएको थाहाबाट पत्रकार धुब्र ढकालले जानकारी थिए । दम्किबाट खोलाले बगाएको उनलाई चार सय मिटर तल पुगेपछि स्थानीयले उद्धार गरि अस्पताल पु्याएका थिए । उनको अस्पतालमा ज्यान गएको ढकालले बताए ।
यस्तै थाहानगर पनि बर्षातका कारण विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ । विद्युतको काारणले संचार क्षेत्र समेत प्रभावित भएको संचारकर्मीहरु बताएका छन् । भने थाहाको विभिन्न स्थानमा सानोतिनो पहिरो खसिरहेको र त्यस्तो कुनै मानविय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
गाउँपालिका ४ दिन देखि विधुत र सञ्चार बिहिन
मकवानपुर इन्द्रसरोवर गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा बिगत ४ दिन देखि विधुत र सञ्चार बिहिन भएको छ । अविरल परेको बर्षका कारणले बिद्युत मर्मत गर्न नसक्ने भएको कारणले अन्धकारमा बस्नु पर्ने भएको छ । यस्तै मकवानपुर इन्द्रसरोवर गाउँपालिका भएर साना मझौला टाटा सुमो लगायतका सवारी साधनहरु बाटो अवरुद्धका कारण बिचबाटोमै बस्नु पर्ने भएको छ । विगत ५ दिन देखि परेको पानीका कारणले इन्द्रसरोवर गाउँपालिका २ कुलेखानीको सुकौरा भन्ने ठाउँमा पहिरोका कारण हेटौडा कुलेखानी फाखेल फर्पिङको बाटो बन्द रहेका प्रहरीले जनाएको छ । वडा नम्बर २ र ३ को सिमाना पहिरोका कारणले केहि दिन देखि कुलेखानी सिस्नेरीको बाटो पनि बन्द रहेको हाम्रा सम्वाददाता आस बहादुर लामाले बताए ।
खोलामा फस्यो बस
पुर्वी मकवानपुरको वागमती गाउँपालिका स्थित वडा नंबर १ बन्जरे र माझगाउँ सम्झना बजारको सीमानामा राईगाउँवाट हेटौंडा आउँदै गरेको गरेको यात्रुबाहक बाढीको कारण खेस्रे खोलामा फसेको छ ।
यात्रुसहित खोला तर्ने क्रममा एक्कासी बाढी आएपछि यात्रुहरु बसबाट सकुसल निस्केपनि बस भने खोलामानै रहेको स्थानीयवासीले जनाएका छन् । खोलाको सतह बढेको कारण बसलाई उक्त क्षेत्रबाट निकाल्न सकिएको छैन् ।
नेपालमा थपिए दुइ सय ५५ जना कोरोना सङ्क्रमित, १६ हजार चार सय २३ पुग्यो
मोबाइल नहुँदा अनलाइन कक्षा पढ्ने सपना अधुरै ! सहयोगको अपेक्षा
८० बर्षिया हेटौँडा ११ की कान्छिमायाको पिडा : यस्तो दुख शत्रुलाई पनि नआहोस्
नेकपा मकवानपुरले दियो पार्टीको केन्द्रीय कमिटिलाई ज्ञापनपत्र
लियो क्लव भुटनदेविले दियो विपन्न १४ परिवारलाई खाद्यान्न
मकवानपुरगढि गाउँपालिकाले घाँस काट्ने मेसिन दिए पछि कृषकको मुहारमा हाँसो